Izindaba - Izizathu zokuthandwa kwamabhodlela engilazi yesoda lime
Izizathu zokuthandwa kwamabhodlela engilazi yesoda lime
Amabhodlela engilazi ayizitsha zemithi, ukudla nemikhiqizo yokunakekelwa kwempilo. Phakathi kwazo, ibhodlela lengilazi le-soda lime lenziwe ngezinto zokusetshenziswa ezihlanzekile futhi zahlanzwa endaweni yokusebenzela yokuhlanza esezingeni elingu-100,000. Amabhodlela engilazi yeSoda-lime kulula ukuwenza, anezimo zamahhala nezishintshashintshayo, nezinhlobo ezahlukahlukene zamabhodlela. Kungani amabhodlela engilazi yesoda-lime aziwa kangaka? Ibhodlela lengilazi le-Soda-lime lenziwe ngengilazi ye-soda-lime yokwelapha njengezinto eziluhlaza, ezinokuqina okuhle kwamakhemikhali, ukumelana ne-asidi, ukumelana kwe-alikhali, nokumelana nokugqwala. Ingasetshenziselwa ukupakisha iziqukathi zemithi ehlukahlukene. Ibhodlela le-soda lime ingilazi inezakhiwo ezinzile zomshini. Ingamelana nengcindezi esebhodleleni ngesikhathi sokuhamba namandla angaphandle ngesikhathi sokuhamba kwangaphandle. Kwenze inqubekelaphambili enkulu ekulweni nokuqhekeka. Ukucaciswa okuhlukile kuqukethe amandla ahlukene, angahlangabezana nezidingo zamakhasimende ngamakhono ahlukahlukene wemikhiqizo. Amandla ahlukene anezinhlobo ezahlukene zamabhodlela, futhi ukwahlukaniswa kwamabhodlela nakho kuhlukile. Ingafakwa ikhava ye-aluminium, ikhava ye-aluminium ene-anodized, ikhava yeplastiki enemibala ehlukahlukene, i-butyl gasket, i-silicone gasket, i-pe gasket, njll. Ibhodlela lesilazi le-soda linamandla aphelele. Amakhasimende angakhetha ngokuya ngamandla emikhiqizo ayidingayo, futhi angenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Ikhwalithi ihambisana nezidingo zamakhasimende, futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Ukupakisha kwebhodlela lengilazi leCoca-Cola kusetshenziswe iminyaka engaphezu kwengu-100. Lokhu akuyona iCoca-Cola kuphela, futhi kuyisikhathi esifanele ukukhunjulwa embonini yokupakisha. Ngokuthuthuka okusheshayo kwezimboni namuhla, imikhiqizo yethulwa ngezinga elisheshayo. Amanye amaphakheji amasha athathelwe indawo amanye amaphakheji ngaphambi kokuthi ajwayelane namehlo abantu. Iphakethe lamabhodlela engilazi selisetshenziswe isikhathi eside. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-100, lokhu kusho okukhulu. Eqinisweni, kusukela ekuhlaziyweni kwedatha yethu ehlukahlukene, isivinini sokuvuselelwa kokupakishwa kwamabhodlela engilazi ngemuva kokusetshenziswa kuhamba kancane kakhulu kunamanye amaphakheji afana nepulasitiki nebhokisi. Lokhu kungenxa yokuthi izindleko zokukhiqiza zokupakisha amabhodlela engilazi ziphakeme kakhulu, futhi ukushintshwa kwemishini yokukhiqiza kuzoba phezulu kuzo zonke izici. Esinye isici ukuthi imikhiqizo yokupakisha amabhodlela engilazi ngokuvamile isetshenziswa emikhiqizweni esezingeni eliphakeme kakhulu, futhi abakhiqizi bamabhodlela engilazi banezidingo eziqinile zokuqina kokupakishwa komkhiqizo. Kepha ukufeza ukupakisha okudala njengamabhodlela engilazi e-Coca-Cola, kuningi okudinga ukwenziwa. Ikakhulukazi esigabeni sokuqala sokuklanywa kwamabhodlela engilazi, kufanele wenziwe umsebenzi omningi, futhi ucwaningo olwengeziwe lwemakethe lubalulekile.Kumenzi, uma ukufakwa kwebhodlela lengilazi kungenziwa kube yinto yakudala, ngeke kusize nje ekubumbeni umkhiqizo , kepha kulayini wokukhiqiza, kuzosusa izindleko zokushintshwa, futhi kunciphise nezindleko ezicini ezahlukahlukene zokuqeqeshwa kokusebenza kwabasebenzi. . Ngakho-ke, ukubumba ukufakwa kwamabhodlela engilazi okuyimpumelelo kungathiwa kunenzuzo futhi akunangozi kubakhiqizi.
Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Glass Bottle Nge Spray Pump, Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha,